‘ऐश्वर्य’ पोष्टरमा केकीले पाइन् ठाउँ
मिति : २०७४ फाल्गुन ८, सोमवार
कात्तिक ९ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको वर्षको प्रतिक्षीत फिल्म ‘ऐश्वर्य’ यतिबेला विभिन्न कारणले चर्चाको शिखरमा छ । 'तिमी रोएको पल' बोलको गीतको कारणले होस् वा पावरफूल ट्रेलरले गर्दा नै किन नहोस् ‘ऐश्वर्य’को चर्चामा कमी आएको छैन । रमेश उप्रेती, प्रशान्त ताम्राकार, दीपिका प्रसाई लगायतका कलाकारहरुको फिल्ममा मुख्य भूमिका छ ।
फिल्ममा केकी अधिकारी पनि मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । तर, निर्माण पक्षले केकीलाई लुकाउँदै आएको छ । फिल्मको फस्ट लुक पोष्टर र टीजरमा केकीले ठाउँ पाइनन् मात्र ट्रेलरमा दर्शकले उनलाई देख्न पाए । फिल्मको प्रचार साम्रागीमा फिल्मकी नव-नायिका दीपिकालाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कतै केकी रुष्ट भएकी त होइनन् ? कतै निर्माण पक्षसँग केकीको द्वन्द्व सुरु भएको पो होकि ? सिनेवृतमा यस्ता अनेकथरी बहस चले ।
ट्रेलरले यो प्रश्नको उत्तर दियो । तर, केकी फिचरिङ फिल्मको पोष्टर निर्माण पक्षले बाहिर ल्याएको थिएन । ‘ऐश्वर्य’को प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा केकी फिचरिङ फिल्मको फस्ट लुक पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । एक तश्वीरमा केकी रमेश उप्रेतीको काँधमा हात राखेर मन्द मुस्कानमा देखिएकी छिन् भने दोस्रो तश्वीरमा खलनायक प्रशान्त ताम्राकारको पछाडि उभिएकी छिन् ।
‘सुनकेसरी’ टीजर : हेर्नुहोस् ऋचाको हरर रुप
पुष्पलाई सफलताको तिर्खा !
‘ब्लाइन्ड रक्स’ ले हङकङ सेन्सरबाट पायो ‘यू’ प्रमाणपत्र
दीपिका-रणवीरसँग भंसाली गर्न चाहन्छन् अझै ३ फिल्म
दोस्रो हप्तामा ‘कृ’, रिलिज भयो ‘उकालीमा पछि-पछि’ गीत